WAAJIBAADAHA kuwa igu caaya “VO COC” - The Holy Land of Vietnam Studies
2434 Views 0 Comments
waa maxay "Vo Coc"? Taasi waa magaca aan ugu yeedho kaligay markaan arko qaabkiisa ”halkii aan ka garan lahaa asalkiisa - kaymaha ama beeraha - in loogu magac daro kuwa “War wareegaa”. Farshaxanka dagaal ee aan soo bandhigo waa "Võ rừng - fanka dagaalka fanka" or “Võ ruộng - goobaha fanka dagaalka”, "Võ đường phố - farshaxanka wadada", "farshaxanka halganka indhoolayaasha", ama "Võ giang hồ - warwareega fanka dagaalka"?!
Intii aan yaraa, anigu ma arag qof caynkaas ah sameeya fankaas dagaal, kaliya dhagayso, iska daawo Foomka Tiger (qaabka shabeelka), Foom daayeer ah (Qaabka daanyeerka) Foomka Masaska (qaabka masaska) ama Foomka Phoenix oo gacmaha kor u qaada sida baalasha oo kale. Guud ahaan, ninku wuxuu inta badan ku daydaa dhaqdhaqaaqa, ficilka xayawaanka si loo abuuro fanka dagaalka sida qaababka xayawaanku ugu dagaallamaan isdifaacidda bilowga. Laakiin dadku inta badan dhag jalaq uma siiyaan jirrabka. Miyay ku sifeynayaan noocan oo kale ah fanka dagaal Tieu Ngao Giang Ho or Anh Hung Xa Dieu? Ama ka yimid waddan Afrika ka mid ah - oo leh labada gees ee wiyisha - ama Koonfur-bari Aasiya - oo leh geeska wiyisha - sirta qarsoon, ama hawdka mugdiga ah, ama aagga qoyan ee geetooyinka liita?
Waxay ahayd galab… waan xasuustay. Waqtigaas waxaan ahaa ciyaal iskuul. Laga soo bilaabo dugsiga waxaan ka imid guriga albaabkiisa - waddooyinka tareenka - agagaarka iridda 1, Saigon. Waxaan la kulmay a "Dhalo nin" dhagaxa dul fadhiya. Dhabarka joonyad, cagihiisa - eey jaalle ah. Si aamusnaan ah ayuu u fadhiistay, isagoo horay u sii fiirinaya sida aan aniga i dareemin - wiil hortiisa taagan oo ilaah ciida ah. - Halkee ka timid? "Bum?"
Qaabka codkeyga sida a “Abaabulay Saigon” inuu weyddiisto ogeysiiskiisa laakiin kama uusan dhigin inuu fiiro bixiyo.
Kaliya eeyaha carrabkiisa ka soo baxaa ayaa ii eegay qaabkiisa "Salaanta" iyada oo ka wakiil ah milkiilaha. Oo saasay ahayd “Ixtiraam” sidaas Codkayga waan dejinayaa.
- Ma waxaad qaldameysaa khalad?
- Maya! Kaliya ciyaar! Waa hagaag?
Kama jawaabin laakiin waxaan kor u qaaday garka si aan u waydiiyo si joogto ah:
- Miyaad tahay dhalo dhalo?
Wuu foororsaday, laakiin indhihiisu way ahaayeen "Yaab" ii. Markaa taasi way hagaagsanayd in la adeegsado isaga! Waxaan ag fadhiyey isaga. Eygu intuu orday ayuu orday si uu u yeelo saaxiibtinimo.
- Guri miyaad leedahay?
Madaxa ayuu ruxay.
- Hagaag! Waa mugdi, adigu halkan joog.
Wuu i eegay?
- Ma hagaag baa?
- Haa waan u sheegi doonaa madaxa qoyska.
Waxay u muuqatay inaan anigu ahaa “Hogaamiye” laakiin wali waa la helayaa “Taliye gaang”
Tan iyo markaas, waan lahaa "Laba saaxiib" - isaga iyo eeyga. Subax kasta, wuxuu qaadi jiray jawaan si uu uga soo qaado alaabtii khasaartay ee waddooyinka tareenka laga bilaabo iridda 1 illaa kiiloomitir 11 ka dibna wuxuu toos u aadaa Go Vap, Di An. Eygu wuxuu orday sida Te Thien in la caawiyo monk Tam Tang, tegey oo ku soo laabtay on “Wadada Xariir”. Galabtii, macalinka iyo ardaygu waxay ku soo noqdeen hurdada oo fadhiisteen kursiga keydka agtiisa.
Jaantus: Vo Coc - Fanka dagaalka
Galabnimadii, qorraxdu way ifaysay, dhalada dhalada ayaa soo noqotey goor hore, iyagoo gacanta ku haya joonyaddii ay ku xirtay qaar ka mid ah agab loo lunsaday. Dhalo, weel, weel jabay, dheriga oo aan lahayn dhalo, dhalo dhaylo saafi ah (kabaha parachute) maryo huwis ah, saraawiil jeexjeexday… Waxay u muuqdeen “alaab cusub” - taas oo aanan dan ka lahayn. Markaas ayaan isku dhejiyay - cod bum ah.
- Aan tagno Thai Binh Market.
Wuu isxaaqay markaas ayuu ila raacay. Eeygu wuu naga daba orday - sida inuu ku dhex socdo riwaayad cusub - isagoo ka gudbaya waddada aan waxba ka ogeyn noloshiisa, raacsane. Wiilka dhalooyinka ku yaal, inta badan magaalada loo maro waxay ahayd wax aan la aqoon, maxaa yeelay ma ahayn sida ugu wanaagsan ee lagu kasbado noloshiisa. Wadada oo leh seddex jiho, bidix saldhig gaas waxaa ku yaallay Thai Binh Market, midigta waxaa ku yaalay tiyaatarka Khai Hoan, oo dib u jaleecaysa garoonka iyadoo dad badani isugu soo urureen cawska, waxaan isku daynay bal eeg waxaasi waxay rakaabku isugu soo urureen inay arkaan “Bandhig faneedka daawada farshaxanka Shandong”. Laakiin waxay ahaayeen laba nin oo Faransiis ah - nin yar iyo nin weyn oo orso leh. Waxay ku soo bandhigayeen fanka dagaalka labbiska dharka cad, midna suunka madow midka kalena caddaanka.
Sidii aan imid u muuqday, ninkii yari wuxuu igu qabtay sariir, wuxuu igu garaacay farsamo Judo iga dhigtay hoos u soo dhaca xagga samada oo isagu qoorta iga xirtay si xor ah. Yaab! Waxba ma aqoonsanin laakiin gacmaha iyo lugaha kiciyay ka dibna waan isweydiyey! Si lama filaan ah, dhalada dhalada ayaa ku dhacday ka dibna madaxa ayuu u tuuray madaxa ninka yar ee Faransiiska taasoo ka dhigtay inuu i fuulo. Markaasaan istaagay! Ey aad buu u qayliyay! Markaas koray!
Markiiba, ninkii weynaa ee Faransiiska ahaa ayaa kudhacay inuu qabto dhalada dhalada, dib ayuu u noqday. Ninkii Faransiiska ahaa ayaa u dhawaaday inuu ku dhufto feerka tooska ah ee farshaxanka fanka dagaalka. Dhalooyinku wiilku si dhakhso ah ayuu ugu laabtay si looga fogaado dhinaca bidix. Ninkii Faransiiska ahaa ee weynaa wuxuu u dhawaaday inuu dhalo dhalada dhalada. Jidh kasta wuu argagaxay "Oh". Qof ayaa qayliyay Iska ilaali! Iska ilaali! ”
Dhalada dhalada ayaa ku booday dhanka midig. Wax qabad lahayn, ninka weyn ee reer Faransiis ah ayaa u foorarsaday inuu baxsado mindida lugtiisa lugta. Waxay ahayd dagaal. Jidh walbaa wuxuu aaday meel fog. Waxaan dib ugulaabtay eyga ka dibna istaagay meel ilaalin ah. Jawigu wuu kacsanaa. Waqtigaas indhaha oo dhami waxay dul ahaayeen dhalooyinka. Wuxuu weli waday joonyaddii. Wuxuu eegay ninka Faransiiska inuu daawado habka farsamadiisa. Bacda hoos dhig! qof qayliyey. Bacda ayuu saaray. Ninkii Faransiiska ahaa ayaa si joogto ah isaga weerarayay. Wuxuu jirkiisa u weeciyay ka dibna cagaha jiifsaday oo gudaha galay, bidix u dhaqaaqay, oo midig u dhaqaaqay sidii suul. Ninkii Faransiiska ahaa ma uusan aqoon sida loo garaaco, ka dibna wuu foorarsaday inuu ku dhufto meesha sare ee dagalka. Jidh walbana wuu qayliyay:
- Haye! Toad, ka bood!
Isagoo leh, "Thang Coc" - oo hadda loo yaqaan naaneys cusub - wuxuu u rogmaday sidii hillaac dufan oo laad laadlaad leh oo cagtuu ku dhuftay gacanta oo sita tooreyga ninka Faransiiska. Tooreydii ayaa ka tagtay gacantiisa waxayna ku dhacday cawska. Thang Coc Wareegto ka dib si loo qaado daarta si “muujiyo” laakiin ma uusan isticmaalin. Qof kasta cod weyn buu u qayliyay. Xaalad murugo leh, ninkii Faransiiska ahaa ayaa garaacay Thang Coc shil. Thang Coc u dhaqaaqay si looga fogaado ka dibna si lama filaan ah si toos ah u taabtay gumaarka ninka Faransiiska. Wuu murugooday ka dib guutadiisa wuxuu ku wareejiyay gacmihiisa. Qof kasta cod weyn buu u sacabiyay mar labaad. Laba nin oo Faransiis ah ayaa calaacashay inay u cararaan guryo ka soo horjeedda oo guryo badan leh. Way ordeen oo qayliyeen “Mcc xà lù! A - nam - mit (Fuck you, Fiyatnaamiis!) ”
Qof walba wuxuu naga qabtay sedexdayada sidii aan ugu aargudan lahayn aargudashada. Gaar ahaan, eeygu wuxuu ku tuuray samada xagga dadku. Markaa qabta! Kadib tuur! Hooray. Ey buu qayliyay. Waxaan dareemay wax yar "masayr". Guul kama aysan gaarin dagaalkan dhaw laakiin "Baaba'aan, baaba'ida, qulqulaya". Laakiin waxaan si lama filaan ah u ogaaday inuu u duulayo sida buro buunka oo kale. Way ka sii duntay, ciidamadu waxbadan ayey weerareen. Markaa dhalada dhalada ahi waxay lahaayeen koox taageera. Wuxuu isku kalsoonaan jiray oo firfircoon. Sidaa darteed dagaalkii si guul ah ayuu u dhammaaday. Dadka oo dhami way sii wadayeen inay eeyga hoos u tuuraan! Waxaa “Jilicsanaa, go'day, qaribay”.
Markii ugu horeysay ee aan qiimeeyo guushaan, wiilka dhalooyinka ayaa uqalmay 10 dhibcood. Aniguna waxaan haystay 7 dhibcood dagaalka awgood ee ah "istiraatiijiyadda adkaysiga". In kasta oo la i qabtay oo la i jirdilay kuwa iga soo horjeeda ayaan kaliya ka dhawaajiyay, ma bixin wax faahfaahin ah. Nasiib wanaag waxaa la igu soo badbaadiyey waqtiga. Marka mudnaantaydu waxay noqotay 8 dhibcood. Laakiin si tartiib tartiib ah, waxaan u maleynayay in eey tahay inay ahaato 8 dhibcood. Markaa si cad ayey u adeegsatay "xammuulka" sida dabka madfaca "si loogu hanjabo" loona wiiqo ruuxa cadowga ah. Taas ka dib, waxaan dareemay in eey u qalanto 9 dhibcood.
Kadib qof walbaa si otomaatig ah ayuu iskagala tagay. Ka dib booliska ayaa yimid oo cod dheer ku qaylinaya! Dagaalkii waxaa qabsaday nin mobster ka ahaa suuqa Thai Binh isagoo booban. Waqtigaas ka dib, waxaa maskaxdayda ku jiray wax la mid ah ixtiraam iyo tixgelin sida saaxiib ama halkii macalin ahaa!
Maalin maalmaha ka mid ayaan walaalkii weydiiyay:
- Waad ogtahay fanka dagaalka!
Jaantus: Vo Coc - Nguyen Manh Hung
- Waa maxay laanta fanka legdinta! Ka hadal!
Isaguna wuu iska aamusay.
- Toatka fanka? Eeg sida!
Wuxuu kaloo yiri waxba!
Laakiin Habeenkii Dayaxa oo buuxa, Thang Coc wuxuu ii yeedhay si aan u barto sida loo isticmaalo ka dibna loo neefsado, la nuugo. Dhowr maalmood ka dib, wuxuu i baray inaan gacmaha iyo cagaha u dhaqaajiyo afar jiho oo hal lug dib loo jiido midka kalena riixay. Ka dib wuxuu igu yiri inaan taabto farta labada gacmood si ay u tijaabiso xoogga. Ka dib u dhig laba lugood guri dheel dheel dheel sida dumarku yahay.
Intaa ka dib wuxuu i baray qaab dhulka ah sida a "Toad" in aanan waligey ku arkin iskuul kasta oo fanka dagaalka ah noloshayda laga soo bilaabo Saigon ilaa Ma Lang, Nga Ba Chu Ia ama Xom Cui ilaa Phu Lam. Kadibna Japan, France, United States of America, Italy,
Jarmalka, Oeclioslo Yisikia…, intaas ka dib, ma arag qofna oo sameeya fanka dagaal ee caynkan ah!
Hadana wali garan maayo xididada "Thang Coc" meeshuu ka yimid iyo cidda sayidkiisu ahaa. Hubaashii, waa inuu lahaadaa saygaaga. Oo sidee buu noloshu ahaa? Fursadan uma aanan helin!
1. Kuxirxiiste Professor, Dhakhtarka Taariikhda.
(Xigasho: The Pioneers oo wadada u saaray Wadada Farsamooyinka Fanka ee Fiyatnaamiis Dunida - Qeyb 3)
◊ MASTERS oo igu caaya "Vo Coc" - Vi-VersiGoo
◊ MASTERS oo igu caayaya "Vo Coc" - Fr-VersiGoo
◊ MASTERS oo igu caaya "Vo Coc" - Ar-VersiGoo
◊ MASTERS oo igu caaya "Vo Coc" - Ch-VersiGoo
◊ MASTERS oo igu caayaya "Vo Coc" - Sp-VersiGoo
◊ MASTERS oo igu caayaya "Vo Coc" - Ru-VersiGoo
(Booqday jeer 1,144, booqashooyinka 1 maanta)
Views Views: 2,321
← WRESTLING - Waa nooc ka mid ah dhacdooyinka OLYMPICS ee Fiyatnaam
Raadinta “VO COC” →
Booqashada Maanta: 196
Booqashooyinka Maalmihii 7 ee ugu dambeeyay: 3,117
Guud ahaan Wadarta: 286,012